तपाइँ कति भाग्यमानी यसरी आफ्नो निधारको साइज हेरेर थाहा पाउनुस ! – Allindiabc
November 7, 2019 November 20, 2019 by admin
तपाइँ कति भाग्यमानी यसरी आफ्नो निधारको साइज हेरेर थाहा पाउनुस : शास्त्र अनुसार मानिस को सरिर को बनावट बाट मानिस को बानि व्यहवार सबै थाहा हुने गर्दछ ! कुनै पनि मानिसको सरिरको बनावट अंग हरु बाट उसको व्यक्तित्वको बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ !ज्वातिश हरुले अनुहार हेरेर व्यक्तिको बारेमा भुत बर्तमान र भविस्यको बारेमा भन्दिन सक्छन ! एदि तपाइँ ज्वातिश शास्त्र मा बिस्वास गर्नुहुन्छ भने ज्वातिश हरुले तपाइको अनुहार हेरेरै तपाइको भाग्य बताउन सक्दछन ! आउनुहोस
Prevधनुषामा जन्मिएकी डा. रश्मी शाह ‘नासा’बाट सम्मानित
Nextजान्नुहोस : यी ३ राशि भएका पुरुषप्रति महिलाहरू प्रेममा पागल हुन्छन्, कतै तपाई त पर्नु भएन ?
सुत्नुअघी ५ सय किलो सुनबाट बनेको लक्ष्मी मन्दिरको महिमा पढेर जसले सेयर गर्छ उसको मनोकामना पुरा हुन्छ